Md Cabdullaahi Goodax Barre Oo Ku Taliyey In Baarlamaanka Hadda Jira Ay Doortaan Madaxweyne – Great Banaadir
Wasiirkii Hore ee Waxbarashada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa ka hadlay khilaafka ka taagan doorashada dalka ka dhaceysa, xili weli lagu muransan yahay.
Goobax Barre oo Qoraal soo saaray, ayuu waxuu ku baaqay in xal laga gaaro is marin waaya ka jira doorashada, isla markaana sheegay in loo baahan yahay in dalka laga badbaadiyo qalalaase siyaasadeed oo ka dhaca.
Waxaa uu sheegay Wasiir Hore Goodax Barre in xaaladda xiligaan dalka ku jiro looga bixi karo oo kaliya, qaskana looga badbaadi karo markii Xildhibaanada Labada Aqal ee Baarlamaanka waqtigiisu dhammaaday ay doortaan Madaxweynaha Soomaaliya.
“Waxaan xoojinayaa aragtideydii ku aaddaneyd xal u helista muranka doorashada iyo in dalka laga badbaadiyo qalalaase siyaasadeed, boobka doorasho aan la isku raacsaneyn iyo kala qeyb-sanaan horseedda dib-u-dhaca horumarka dalka” ayuu yiri Goodax.
Sidoo kale waxaa uu ku taliyey Goodax in Xildhibaanada shaaciyaan xilliga araaji qabashada dalka ee 2021, ololaha iyo doorashada kursiga Madaxweynaha, iyadoo Xukuumadda ay ka madax-bannaan tahay.
“Xaaladda cakiran ee uu dalku maanta ku jiro waxaa looga bixi karaa, isla markaana qaska looga badbaadin karaa in Baarlamaanka JFS Labadiisa Aqal ee hadda jira ay doortaan kursiga Madaxweynaha, isla markaana ay iclaamiyaan xilliga araaji qabashada, ololaha iyo doorashada kursiga Madaxweynaha, iyadoo Xukuumaddu ay ka madax-bannaan tahay” ayuu sii raacsiiyey hadalkiisa Wasiir Hore Goodax Barre.
Isaga oo sii hadlaayay Wasiirkii Hore ee Waxbarashada Xukuumadda ayuu yiri: ”Waxaan guud ahaan Ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan Waxgaradka, Aqoonyahanka, Culuma-u-diinka, Dhallinyarada, Haweenka iyo Bulshada qeybahooda kala duwan ka codsanayaa in ay u istaagaan sidii dalkan dawladnimo dhameystiran loogu jiheyn lahaa, kana hortagaan wax kasta oo dhib u keeni kara dalkeena.”